Ithegi: amakhonkco e-imeyile | Martech Zone
Ithegi: amakhonkco e-imeyile
Uluhlu lwakho lokugqibela kunye nolugqibeleleyo lokuthumela i-imeyile!
Ayisoze yasilela… kanye ngeveki ndifumana i-imeyile entle kwibhokisi yam ebhalwe i-FNAME okanye ikholaji yemifanekiso engenanto engenawo omnye umbhalo. Okanye ndiyifumana kwi-retina bonisa ngemifanekiso engacacanga. Okanye ndiyivula kwifowuni ephathekayo kwaye andinakuyifunda kuba i-imeyile ephathekayo ibingaphenduli. I-imeyile lishishini elinobuzaza… sisaziso esisisiseko sokuvumela ukuba ishishini lakho lingene kwi